Maamulka Kaalinka 5aad oo Xadhig iyo Dhibaato u Gaysata Dhalinyarada Hore Ugga Tirsanaan Jiray ONLF – Rasaasa News
Oct 2, 2009 Jwxo-shiil, ONLF
Jijiga – [October 01, 2009] – Warar aad loogu kalsoonaan karo oo ka imanaya magaalada Jijiga, ayaa waxay sheegayaan in dhibaato xoog leh uu Maamulka Kaalinka 5aad ku hayo dhalinyaro hore uga tirsanaan jiray ururka ONLF. Ururka ONLF, oo ay dhibaato xoog leh soo food saartay, ka dib kolkii uu khilaaf xoog leh ka dhextaagnaa ururka dhexdiisa, khilaafkaas oo la xalin waayey ayaa waxaa uu keenay gacan ka hadal keenay dilal, kuwaas oo aad looga xumaaday kolkii sanadkan bilowgiisii lagu dilay rag qiimo ku lahaa halganka uu waday ururka ONLF.
Waxaa uruka ONLF, soo foodsaaray burbur kaga yimid dhinaca dadweynaha Somalida Ogadeeniya kolkii ay Jabhadu lumisay kalsoonidii ay dadweynuhu u hayeen, taas macanheedu ma aha in ay dadweynuhu raaceen Itobiya, oo ay naceen halgankoodii laakiin waxay naceen hogaanka Jwxo oo khiyaamay halganka keenayna dhibaato aan hore u dhicin, ka dib dagaalkii 1964, kaas oo ku dhamaaday colaad dadweyne.
Arintaas waxay keentay in ay kala tagaan ciidamadii ururka ONLF oo iyagu ahaa kuwii halganka waday, waxaana khasab ku noqotay dhalinyarada in ay ku soo laabtaan degaanadoodii iyaga oo aan u soconin wax colaad ah. Hadaba, sida ay wararku nagu soo gaadhayaan maamulka Kaalinka 5aad, ayaa waxay dhibaato xoog leh ku hayaan dhalinyarada ku soo laabanaysa degaanadooda, arintani ma aha mid ay la qabto xukuumada Federaalka Itobiya sida warka lagu sheegay.
Waxaa Maalin walba lagu xidhaa dhalinyaradan hore uga tirsanaan jiray ONLF magaalooyinka, Wardher, Godey, Qabridahar, Dhagaxbuur, Fiiq, Liibaan iyo Afdher. Xadhigan ay maamulka Kaalinka 5aad la beegsanayaan dhalinyaradan ayaa ah mid aan loo baahnayn, waxay dhalinyaradu xaq u lee yihiin in ay ku noolaadaan dhulkooda, kolba hadii ayna dhib ku haynin Maamulka Kaalinka 5aad iyo xukuumada Tigray midna.
Arimahan lagu samaynayo dhalinyara ayaa waxaa ay dabo socdaan siyaasad xun oo ay Itobiya waligeedba kolka ay Jabhaduhu burburaan, dalka waxay ka mamnuucdaa xubnaha ka tirsan ururada hore ula dagaalamayey, iyada oo ugu yeedha shufto, budhcad iyo wixii la mid ah, dabadeedna toban sano ka dibna dib isu soo abaabula iyaga oo mar labaad dagaalo ka bilaaba degmooyinkooda.
Mamulka Kaalinka 5aad iyo Itobiya waa in ay ogaadaan dhalinyarada ONLF ka soo xaroonaysa in ay yihiin dadka dalka leh, ee ayna ahayn dad ajnabi ah. Hadii aan loola dhaqmin dhalinyarada wanaag, oo aan la soo dhawaynin, loona qaban wax badala noloshooda, waxaa dhab noqonaysa in Kaalinka 5aad iyo Kaabahooda Tigray uu kaddeedku ka socdo.
Maamulka Kaalinka 5aad waxaa ay Jaaliyadaha taageersani waydiisteen, in la sii daayo dadweynaha ku xidhxidhan dhulka Ogadeeniya ee aan dambiga lahayn kii dambi lehna dambigiisa lagu xukumo. Maanulka Kaalinka 5aad wuxuu siidaayey oo kaliya 2% wixii ay jaaliyaadku waydiisteen.
Wuxuuna Kaalinka 5aad bilaabay in dhalinyarada ka soo xaroonaysa ONLF, intii la soo dhawayn lahaa xadhiga laga waraabiyo, waxay keeni dhibaato hor leh, hadii aan loola dhaqmin wanaag.
rasaas baa runta sheegee rafiiqaaga u yeel